Ny fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin'ny Statistic Readability Word
Alao sary an-tsaina ny fahasamihafan’ny mpihaino anao. Ny olona voalohany mitsidika ny tranokalanao dia mety hamaky amin’ny ambaratonga oniversite ary mahatakatra teny lehibe, fa ny mpitsidika tranokala manaraka dia mety mila rakibolana mba hahalala ny zavatra lazaina. Tena mahakivy izany ary eo amin’ny tontolo an-tserasera, izay tian’ny olona ny fampahalalana eo no ho eo, ny tranga vaky ny mpamaky iray mandany fotoana hikaroka teny tsy mahazatra dia somary mangatsiaka ihany. Mamadika mpamaky fotsiny ianao.
Tsy vitan’ny cangkul zava-dehibe ny fijerena ny haavon’ny fanoratanao, fa te hahazo tsara ianao fa mora vakiana. Ny antontan’isa mora vakiana momba ny teny dia fomba iray ahafahana miantoka ireo lahatsoratrao izay tsy vitan’ny fisintonana ny sain’ireo mpamaky rehetra anao, fa ny fitandreman’izy ireo hatrany.
1.2 Penyusun Kertas
1.3 Statistik Kebolehbacaan Statistik
Mametraka plugin mifandraika amin’ny WordPress blogo. Manontany fotsiny raha mora vakina ny lahatsoratra. Eny sa tsia.
Misy fitaovana an-tserasera tsara iray antsoina cangkul Paper Rater izay ampiasaiko indraindray handinihana ireo lahatsoratra ireo, indrindra raha reraka aho rehefa manoratra na amin’ny fe-potoana haingana izay tsy mamela ny fanovana betsaka araka ny mahazat firaaka fakaaka naaka mahazat Paper Rater it manaraka ity:
Mandinika ny haavon’ny fianarana. Azonao atao ny mametraka ny haavon’ny fanabeazana avy amin’ny kilasy voalohany amin’ny alàlan’ny sekoly fianarana diploma.
Yang terbaik antara semua? Ny mpanolotra taratasy dia afaka amin’ny dikan-teny fototra. Raha te hahazo dikan-doka tsy misy adiresy ianao, dia afaka mampiasa vola ao amin’ny Premium Paper Rater.
Statistik Kebolehbacaan Statistik
Mihoatra noho ny azo inoana, dia efa mampiasa safidy fanamarinana ny fitenin’ny teny ianao. Na izany aza, azonao atao koa ny manome lalana ny Flesch Baca Kemudahan sy Flesch-Kincaid Level Level amin’ny Microsoft Word.
Eo ambanin’ilay fizarana mitondra ny lohateny cangkul "Rehefa ny fitsipi-pitenenana sy ny fifehezana amin’ny teny" dia tokony hanamarina boaty roa.
Kitiho ny boaty "okey".
Ankehitriny, isaky ny fia fisavana tampoka ianao dia mahazo pop-up amin’ny faran’ny farany izay manome anao ny antontan’isa mora vakiana.
Ny fanamarinana ny haavo an’ny kilasin’i Flesch-Kincaid dia manazava tsara. Ho hitanao amin’ny santionany etsy ambony fa ny soratra dia amin’ny 9.3 na volana fahatelo amin’ny taona fahasivy. Mba hahazoana ny atiny ho amin’ny ambaratonga ambaratonga fahavalo, izay tiako, dia afaka manaisotra fotsiny ilay teny cangkul "mahafinaritra" aho izay mitondra azy amin’ny isa 8.8.
Ankehitriny, ny fahatakarana ny isa amin’ny Flesch Reading dia somot sarotra, saingy tsy sarotra loatra. Ny Microsoft dia manazava amin’ny antsipiriany momba io